Novak Djokovic oo ka hadlay Guushii uu ka gaaray Halyeeyga Tennis-ka ee Roger Federer, Ciyaaraha Paris Masters
Sunday, March 24th, 2019 - 09:36:45
Sunday November 04, 2018 - 13:41:43 in Wararka by Muuse Cabdi
Novak Djokovic ayaa qeexay in Paris Masters kulankii uu kula qaatay Roger Federer uu ahaa mid gaar ah, isla markaana qalbigiisa uu ka dareemay.
Guushii Amakaagga ee uu ku badiyay 7-6 (8-6) 5-7 7-6 (7-3) Ciyaar qaadatay 3 saacadood ayaa u suuragelisay in uu soo Gaaro Final-ka Paris Masters, oo ay isku wajihi doonaan Laacibka kasoo jeeda Ruushka ee Karen Khachanov.
Djokovic, oo kusoo laaban doona Laacibka Lambarka 1-aad ee Tennis-ka Dunida Isniinta soo Socota marka la qeybinayo Boosaska laga kala galay Ciyaaraha ATP, wuxuu yiri: ‘Waxaan u wada Ciyaarnay Suul ka Suul.
‘Waxay aheyd Ciyaar aad cajiib u ah.’ Waxaanse sahal aheyn kulanka soo socda ee Khachanov, oo isaguna soo garaacay Dominic Thiem Ciyaar natiijadeedu ku dhammaatay 6-4 6-1 semi-finalkii u dambeeyay.
Djokovic ayaa hadalkiisa intaas raaciyay: ‘Wuxuu ciyaaraa ciyaar tennis oo aad Cajiib u ah. ‘Si wanaagsan ayuuna kubadda ula beegsadaa Halka yoolku yahay. Waxaan isticmaali doonaa waaaya Aragnimadeyda waxaanna rajeynayaa Guul.’